Mogadishu: Guddoomiyaha cusub ee Aqalka Sare DFS
Mudanayaasha Aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa maanta u fariistey in ay doortaan shirguddoonka Aqalka sare, Xilka Guddoomiyaha waxaa cod aqlabiyad ah ku guuleystey Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo helay 43 cod halka ninka la tartamayey ee Qodax uu helay 9 cod oo kelya.
707 views16 hours ago 3:31
USA: Booqashadii Trump ee Xarunta CIA & Dagaalka Saxaafada - Duration: 3 minutes, 31 seconds.
285 views17 hours ago 2:34
Mogadishu: Jawaari oo la kulmay Shariif iyo Faroole - Duration: 2 minutes, 34 seconds.
146 views17 hours ago 3:11
USA: Trump oo xilka loo dhaariyey iyo mudaharaadyo ka dhacay Washington - Duration: 3 minutes, 11 seconds.
626 views2 days ago 2:27
France: Masjidada oo laga joojinayo Lacagta Dibada uga timaada - Duration: 2 minutes, 27 seconds.
170 views2 days ago 3:02
Kismayo: Maxkamada Militariga oo Xukun deg deg oo dil ah ku riday Askari - Duration: 3 minutes, 2 seconds.
245 views2 days ago 4:58
Puntland: Taliyaha Booliiska Goldogob oo xilka laga qaaday - Duration: 4 minutes, 58 seconds.
411 views2 days ago 1:31
USA: Obama oo qabtay Shirkiisii Jaraa'iid ee u danbeeyey - Duration: 91 seconds.
437 views3 days ago 0:58
Mali: Weerarkii ugu cuslaa oo lagu dilay in ka badan 60 qof - Duration: 58 seconds.
318 views3 days ago 4:29
Cadaado: Baarlamaanka Galmudug oo shaaciyey Shuruudaha Murashaxiinta - Duration: 4 minutes, 29 seconds.
521 views3 days ago 2:19
Kismaayo: Dowlada Germany oo taageero u fidineysa Jubaland - Duration: 2 minutes, 19 seconds.
121 views3 days ago 1:35
Putin oo beeninyey inay sir ka hayaan Trump - Duration: 95 seconds.
203 views4 days ago View all
2 days ago245 views Maxkamada Militariga ayaa si degdegleh xukun dil ah ugu riday Askari ka tirsan ciidanka Jubaland oo qof rayid ah ku toogtay magaalada Kismaayo.
2 days ago411 views Taliyihii Booliiska ee degmada Goldogob ee gobalka Mudug, ayaa lagu sameeyey xil wareejin xili uu magaaladaasi kormeer ku joogo Taliyaha Booliiska gobalka Mudug.
3 days ago521 views Xildhibaanada Galmudug oo kulamo ay weli uga socdaan magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee Galmudug ayaa bilaabay qaban qaabintii ugu horeysay ee Doorashada Madaxweyne cusub oo bedali doona Cabdik...
3 days ago121 views Safiirka Jarmalka oo ka hadlay kullanka ayaa sheegtay in maamulka Jubbaland kala shaqaynayso Dhismaha iyo tayaynta Ciidamada qalabka sida iyo dhamaystirka Xarunta dhaqan celinta Maleeshiyadka kasoo...
Cadaado: Guuleed oo NISA u adeegsaday Weerarka Xildhibaanada - Duration: 59 seconds.
4 days ago834 views Ciidamada NISA oo ka amar qaadanaya Madaxweynaha xilka laga qaaday ee Galmudug ayaa weerar ku qaaday Xildhibaanada Galmudug ee ku sugan Cadaado iyo ciidamada Booliiska ee illaaliya.
5 days ago1,186 views Baarlamaanka Galmudug ayaa dhameystiray magacaabida guddiyada loo xilsaaray Doorashada Madaxweynaha cusub ee Galmudug, xili uu Cabdikariim Guuleed diidan yahay go'aankii xilka looga qaaday.
Baydhabo: Shariif Xasan oo ka hadlay Fashilka Ololihiisii Madaxweyne - Duration: 105 seconds.
5 days ago319 views Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo dib ugu noqday magaalada Baydhabo ayaa sheegay inuu ku guuldareystay qorshihiisii ahaa inuu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya, loogana baxay balantii uu la...
Bosaaso: Mashruuca Town Plan Bosaso oo la daahfuray - Duration: 3 minutes, 56 seconds.
1 week ago427 views Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa daahfuray mashruuca qorshaha naqshadaynta magaaladda, kaasi oo kor loogu qaadyo bilicda iyo qaabdhismeedka magaalo ee Bosaso, waxaana...
Mogadishu: Kuraasta Xildhibaanada Federaalka oo la joojiyey in la kala dhaxlo - Duration: 3 minutes, 32 seconds.
1 week ago380 views Guddoonka Baarlamaanka iyo Guddiga Doorashada oo Muqdisho ku kulmay ayaa sheegay in la joojiyey in Kuraasta Xildhibaanada Federaalka la kala dhaxlo!
Qardho: Shirka Cadaalada iyo Haweenka Soomaliya - Duration: 4 minutes, 38 seconds.
1 week ago154 views Shir ay soo qaban qaabisay Hay’ada Cilmi barista ee Hayaan ayaa looga hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa Wacyiga Cadaalada ee haweenka Soomaaliyeed.
Puntland: Wareega 2aad ee Dhaamiska Biyaha Dadka abaarta saameysay - Duration: 2 minutes, 38 seconds.
1 week ago47 views Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si rasmi ah u daah-furay biyo dhaanka wejiga labaad ee gurmadka abaaraha gobolada Puntland-Soomaaliya.
1 week ago3,763 views Ciidamada NISA oo magaalada Cadaado ka bilaabay cadaadis ay ku hayaan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee xilkii ka qaaday Cabdikariim Guuleed.
3 days ago437 views Madaxweynaha Maraykanka ee xilka ka degaya Barack Obama ayaa shalay gelinkii danbe qabtay shirkiisii jaraa’iid ee ugu danbeeyey kahor intuusan xilka Wareejin Jimcaha beri ah.
3 days ago318 views Ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay weerar ismiidaamin ah oo Arbacadii shalay ka dhacay magaalada Gao ee waqooyiga wadankaasi Mali
4 days ago203 views Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka ay warbaahinta caalamka todobaadkan shaaciyeen ee ahaa in sirdoonka Ruushka ay sir ka hayaan Madaxweynaha cusub ee Mar...
Madaxweynaha China oo Maraykanka uga digay dagaal Ganacsi - Duration: 97 seconds.
4 days ago146 views Madaweynaha China oo ka qeyb galaya shirka sanadlaha ah ee World Economic Forum oo ka dhaca magaalada Davos ayaa digniin u diray Dowlada cusub ee Maraykanka.
Turkey: Ninkii geystay Weerarkii Istanbul oo lasoo qabtay - Duration: 95 seconds.
5 days ago2,764 views Ciidamada Amaanka ee Turkiga ayaa xalay saqdii dhexe gacanta ku dhigay ninkii ay baadi goobayeen labadii todobaad ee lasoo dhaafay, ninkaasi oo ahaa kii fuliyey weerarkii lagu qaaday baar ku yaal m...
Gambia: Madaxweyne Yahya oo diidan inuu xilka wareejiyo - Duration: 2 minutes, 51 seconds.
5 days ago690 views Madaxweyne Yahya Jammeh ayaa laga doonayaa inuu Arbacada xilka wareejiyo, waxaana digniin u diray ururka Gobaleedka Galbeedka Afrika oo sheegay inay tilaabo militari ka qaadi doonaan haduusan xilka...
USA: Obama Maxaabiis horleh kasii daayey Guwantanamo - Duration: 54 seconds.
5 days ago195 views Madaxweynaa Maraykanka Barack Obama ayaa 10 maxbuus oo horleh kasii daayey xabsiga Guwantanamo, kuwaasi oo loo dhoofiyey dalka Cumaan oo aqbalay inuu qaabilo maxaabiistaasi.
France: 70 Wadan oo ka shiray Xaalada Falastin iyo Israel oo diiday - Duration: 100 seconds.
1 week ago182 views Magaalada Paris ee dalka France ayuu ka dhacay shirweyne ay isugu yimaadeen 70 wadan oo looga hadlay xaalada Falastiin. Shirkan ayey qaadacday Israel.
USA: Mudaharaadyo looga soo horjeedo Trump oo ka bilowday Washington - Duration: 99 seconds.
1 week ago611 views Magaalada Washington ee caasimada Maraykanka ayey ka bilowdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo Madaxweynaha cusub Donald Trump.
Mali: Shirweynaha Afrika iyo France - Duration: 67 seconds.
1 week ago160 views Shirweynihii u dhaxeeya dalalka Afrika iyo wadanka Faransiiska oo lagu soo afmeeray magaalada Bamako ee dalka Mali.
USA: Lataliyaha Trump oo la ogaaday Xiriirkuu la lahaa Ruushka - Duration: 3 minutes, 27 seconds.
1 week ago759 views Lataliyaha Madaxweynaha Cusub ee Trump, Mr.Michael Flynn oo la ogaaday inuu xiriir toos ah lalahaa Ruushka, xili ay weli taagan tahay xiisada siyaasadeed iyo tuhunka laga qaboo xiriirka Trump la le...
Ivory Coast: Ciidamada Militariga oo Gadood Sameeyey - Duration: 68 seconds.
1 week ago176 views Ciidamada Militariga dalka Ivory Coast ee gadoodka sameeyey ayaa aqbalay heshiis kadib markii loo balanqaaday mushaharkooda.
1 week ago187 views Magaalada Gaalkacyo ayey ku kulmeen kooxaha Somtel iyo Comsed ee magaaladaasi ka wada dhisan, ciyaartaasi oo ku dhamaatay barbardhac 2-2.
1 week ago655 views Magaalada Bosaaso ayaa maanta soodhaweyn balaaran loogu sameeyey Ciyaartoyda Naadiga Bosaso FC oo kamid ah Naadiyada heerka kowaad ee ka qeyb qaadanaya Horyaalka kubada Cagta ee Puntland oo todobaa...
1 week ago336 views Waxaa markii ugu horeysay Xiriirka Kubada Cagta ee Soomaliya uu bilaabay Koobka Horyaalka Kooxaha Heerka kowaad ee deegaanada Puntland, horyaalkaasi oo ay ku loolamayaan 9 kooxood ee ah kuwa ugu wa...
3 weeks ago59 views Qorshahan ayaa ah mid la doonayo in kooxaha gaaraya 32 ee hada ka qeyb qaata Ciyaaraha Finalka ee Koobka Dunnida laga dhigo tiro gaareysa 48 kooxood.
4 weeks ago827 views Waxaa magaalada Garowe ka bilowday Tartanka Kubada Kolayga ee Gabdhaha Soomaaliyeed
2 months ago834 views Xulka Gobalka Awdal ayaa ku guuleystay koobka Ciyaaraha Gobalada Somaliland oo ay ciyaartii ugu danbeysay (Finalka) uga guulaysteen 2-1 xulka gobalka Saaxil.
2 months ago827 views Waxaa magaalada Hargeysa ka bilowday wareegii ugu danbeeyey ee koobka gobalada Somaliland oo ay ku loolamayaan 8 gobal oo wareega ugu danbeeya usoo baxay.
5 months ago26,237 views Muuqaalo goos goos ah ee Goolashii iyo Rigoorayaashii ciyaartii ugu danbeysay ee Puntland Vs Jubbaland. Xigasho: Access Sports tv.
5 months ago2,961 views Xulka matalaya maamulka Jubbaland ayaa noqday kooxdii ugu horeysay ee usoo baxda FINAL ciyaaraha maamulada dalka Soomaaliya ee ka socda Muqdisho. Kooxda Banadir ayey uga badiyeen gool-ku-laad.
5 months ago12,656 views Xulka Puntland ayaa usoo baxay ciyaarta FINAL-ka kadib markii ay 1 - 0 uga badiyeen xulka Hiiraan & Sh.dhexe. Puntland ayaa maalinta isniinta la ciyaari doonta ciyaarta ugu danbeysay Xulka Jubbaland.
5 months ago12,452 views Kooxda Puntland ayaa ku badisay Koobkii Ciyaaraha Maamul Gobaleedyada Soomaaliya oo ka socday Muqdisho. Puntland ayaa ka badisay Kooxda Jubbaland kadib markii loo tuuray Rigooreyaal 5-3. Kadib mark...
4 months ago704 views Kooxaha Bosaaso FC iyo Bari ayaa ciyaar ku dhexmartay magaalada Bosaso xili ay kooxaha heer koowaad ee Puntland isku diyaarinayaan horyaalka gobalada Puntland oo dhawaan bilaaban doona. Ciyaartan a...
1 month ago3,886 views Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh oo diiday inuu difaaco Soomaalida uu aflagaadeeyey Donald Trump iyo Xildhibaanada Minnesota Ilhan Cumar oo jawaab ka duwan tii Xasan bixisay. Akhriso: https://h...
1 month ago2,137 views Muuqaalo iyo Sawiro hawlgalkii Ciidamada Dowlada Puntland ay kooxda Daacish uga saareen magaalada Qandala ee gobalka Bari.
2 months ago9,187 views Waxaa dhaq dhaqaaq militari laga dareemayaa nawaaxiga degmada Qandala halkaasi oo ay gaareen ciidamo ka socda Puntland. Bada magaalada Qandala ayey sidoo kale gaareen Maraakiib dagaal.
2 months ago19,517 views Kooxda Xagjirka ah ee uu Daacishta Soomaaliya ee uu hogaamiyo Cabdulqaadir Muumin ayaa lagu soo waramayaa inay maanta gudaha u galeen magaalada Qandala ee gobalka Bari.
3 months ago17,759 views Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Axmed Karaash oo kormeer ku tagay Maxjarka Gaalkacyo iyo goobihii dagaalada ka dhacay ayaa Jawaab adag ka bixiyey hadalkii Madaxweynaha Galmudug ee ahaa in Gaalkac...
3 months ago58,619 views Waxaa markale dagaalo culus ay dhexmareen ciidamada Puntland iyo Galmudug oo isku haya dhul ku yaal Koonfur Galbeed ee xarunta gobalka Mudug ee Gaalkacyo.
Gaalkacyo: Dagaalka & Xiisada u dhaxeysa Puntland iyo Galmudug - Duration: 4 minutes, 46 seconds.
3 months ago36,984 views Dagaaladii duleedka Koonfur Galbeed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ku dhexmaray ciidamo kala taageersan Puntland iyo Galmudug.
Duqeyntii Maraykanka ee Ciidamada Galmudug - Warbixin Dhameystiran - Duration: 3 minutes, 21 seconds.
3 months ago26,159 views Maraykanka ayaa ka jawaabay eedeyntii maamulka Galmudug ee ahayd in dad rayid ah ku dhinteen duqeyntii ka dhacday duleedka magaalada Gaalkacyo.
Muranka Bada ee Soomaliya, Yemen iyo Kenya - Barnaamij Gaar ah - Duration: 13 minutes.
3 months ago3,933 views Barnaamija Gaar ah oo ku saabsan Dooda iyo Muranka Soohdinta bada ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya, Yemen iyo Kenya. Xog faah faahsan 2009 - 2016.
Musharax Madaxweyne Cumar Cabdirashiid 2016 - 2020 - Duration: 6 minutes, 36 seconds.
4 months ago5,933 views 7:56
5 months ago22,374 views Xubno horey uga tirsanaan jiray kooxaha Al Shabaab iyo Daacish oo qaarkood isa soo dhiibay qaarna la qabtay ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Bosaaso ee xarunta gobalka Bari.
Hawlgalka Ciidamada PSF ka wadaan Gaalkacyo - Duration: 3 minutes, 9 seconds.
5 months ago4,600 views Muuqaalo gaar ah ee hawlgalada ciidamada PSF iyo kuwa DANAB ka wadaan magaalada Gaalkacyo xarunta gobalka Mudug, oo lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan Al Shabaab iyo Macalin Al Shabaabka ee dhanka ...
6 years ago158,666 views Filimkan Kartoonka ah waxaa sameeyey farshaxanka Soomaaliyeed ee Amin Caamir, waxaana xuquuqdiisa iska leh Amin Arts
10 months ago75,755 views Wariye Cali Ducale ayaa wareysi kooban la yeeshay Qaar kamid ah Caruurtii Da'ada yaraa oo ay Kooxda Al Shabaab soo dagaal gelisay, kuwaasi oo markii danbe isu dhiibay Ciidamada Puntland.
5 years ago55,758 views Heestan waxaa wada jiibinaya, Fanaanada weyn Marysan Mursal Ciise, Maxamed Axmed Qoomaal, Cali Xasan (Cali Puntland, Cabdirisaaq Alteezo iyo Xaawo Kiin
10 months ago43,358 views In badan oo kamid ah Maxaabiistii Nolosha looga qabtay Maleeshiyaadkii Al Shabaabka ee ku duulay Puntland, ayaa waxaa ku jiray dhalinyaro da'a yar iyo Caruur aan weli qaan gaarin. Kuwaasi oo dowlad...
4 months ago41,088 views Ciidamada Amaanka ee dowlada Zimbabwe ayaa awood u adeegsaday banaanbax balaaran oo looga soo horjeedo Madaxweyne Robert Mugabe oo ay caasimada Harare ka dhigeen xisbiyada Mucaaridka.
Bob Hollandees Somali ku hadlaya - Duration: 7 minutes, 48 seconds.
7 years ago32,429 views Nin Holland u dhashay oo asagu iskiis isu baray afka Soomaaliga.
Puntland 13th Anniversary - Duration: 20 minutes.
5 years ago31,748 views 3:47
7 months ago31,077 views Idaacada Kooxda Al Shabaab ayaa baahisay cododka kooxdii geysatay xasuuqii Hotel Ambassador.
[VIDEO] People burn ballot boxes in Gardo, Puntland State of Somalia [14 July 2013] - Duration: 64 seconds.
3 years ago30,078 views At least 5 people have been killed and more than 10 wounded in ongoing fighting between residents and government forces in the Puntland city of Gardo (Qardho), on Sunday.The fighting began when h...
Furitaankii Cayaaraha Gobolada Puntland - Duration: 10 minutes.
6 years ago26,897 views Xafladdii furitaanka cayaaraha gobolada Soomaaliya waxaa cayaartii u horeysey isku herdiyey Gobolka Nugaal iyo Shabeelada Hoose waxaana 1:0 ku badiyey gobolka Nugaal
Somali cable - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe SBC SOMALI TV - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Horn Cable TV - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Somali News Tv - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Dal Jire - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Jubaland TV - Channel